[Wednesday, April 19th, 17] :: Madaxweynaha Rwanda iyo wafdi uu hoggaaminayo oo boqoasho Jabuuti ku jooga
Jabuuti (RH) Wadamada Rwanda iyo Djibouti ayaa shaley heshiis shan qodob ka kooban ku kala saxiixday caasimadda dalka Jabuuti, iyadoo madaxweyne Paul Kagame iyo xaaskiisa marwada koowaad Lady Jeannette Kagame ay booqasho labo maalin ku joogaan dalka Jabuuti.
Heshiiska labada dal ayaa xoojinya xiriirka ka dhexeeya wadamadan, waxaana ku jira adeegga hawada, isku socodka dadka gaar ahaan in dadka wata baasaboorada diplomatic iyo service aan laga qaadin wax Viiso ah, in ay horumariyaan xiriirka xagga ganacsiga ee labada dal iyo in ay dhisaan guddi isgaarsiin oo ka shaqeeya heshiisyada labada dal.
Shir jaraa’id oo ay si wadaji ah u qabteen madaxweynaha Jabuuti iyo dhiggiisa Kagame ayey uga hadeen sida heshiiska ay gaareen uu wanaag ugu horseedi karo labada dal iyo shacabkooda.
“Waxa aan sii wadi doonaan xoojinta xiriika aan lee nahay haddii aan nahay Jabuuti iyo Rwanda , waxaan sii wadi doonaa in aan ka muuqano gobalka iyo Africa.Waxa aan ku faraxsanahay horumar kasta oo aan gaarnay oo ku aadan wax aan u baahanahay in aan sameeno,” ayuu yiri madaxweyne Kagame .
Madaxweyne Kagame ayaa ku sifeeyay Jabuuti qaran oo sameeyay horumar si lamid ah dalka Rwanda.
“Waa iska caddahahay in Jabuuti uu yahay dal u dhaqaaqay xagga horumarka waan ku faraxsanahay horumarkaas walaalahaygu ay gaareeyn,” ayuu sheegay madaxweyne .
Madaxweyne Geelle ayaa sheegay in labada dal ay ka go’an tahay sidii xoojin lahaayeen xiirka ganacsiga, maalgashiga, dhaqanka iyo fursadaha kale ee yaalla.
Madaxweynaha Jabuuti ayaa intaas ku daray in labada dal ay sidoo kale horumarin doonaan is dhaafsiga xagga khibradda.